Somalia: Mareykanka oo ciidammo u diray Soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo 1994 - Wargane News
Home Somali News Somalia: Mareykanka oo ciidammo u diray Soomaaliya markii ugu horreysay tan iyo...
Dowladda Maraykanka ayaa ciidan u dirtay Soomaaliya si ay gacan uga gaystaan tababaridda ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab.
Waa markii ugu horraysay oo uu Maraykanka ciidamo caadi ah u diro Soomaaliya tan iyo 1994-kii, inkastoo ciidamo kooban oo ah kuwa la dagaalanka argigixisada ay dalka ku sugnaayeen.
Warka ku saabsan in ciidanka Maraykanka loo diray Soomaaliya ayaa ku soo beegmaya iyadoo dhammaadkii bishii hore uu madaxweyne Donald Trump uu wax ka badalay qaabka hawlgalka ciidamada ka hortaga argigixisada.
Trump ayaa waxa uu saxiixay amar cusub oo ciidanka Maraykanka u oggolaanayo in ay si toos ah uga qeyb qaadan karaan dagaalka lagula jiro waxa loogu yeeray argigixisada.
Waxa la filayaa in ciidamada Maraykanka ay tababaro siiyaan ciidamada wadamada Afrika ka socda ee ka hawlgalaya Soomaaliya.
Dhowr dal oo kale sida UK iyo Turkiga ayaa tababar siinaya ciidammada Soomaaliya.